November 23, 2020 - Online Hartha
November 23, 2020 by Online Hartha
အဘဦးဖိုးနီပြောတဲ့ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ ပါသူများအကြောင်း . ဒီမနက်လဲ နံနက် (၁-၀၀)လောက်မှာနိုးလာပါတယ်။ခါတိုင်းဆို ဘုရားကန်တော့သစ္စာပြုပြီး စာဖတ်၊ ပြီးရင် တရားထိုင်ပြီးက ရေးခြင်တဲ့စာရေးတင်ပါတယ်။ပြီးရင်ပြန်လှဲပါတယ်။ ဒီမနက်ကတော့ စာမဖတ်အားဘဲ ရေးခြင်ဖော်ပြခြင်နေတဲ့ကိစ္စ ရပ်လေး တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ ငါးပါးသီလ လုံစွာနေထိုင်နေပေမဲ့ လောကဓံဒါဏ်ကို ခံနေရတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်ပါ။ မနေ့ကတော့ ဘုရားစာတွေရွတ်ပေမဲ့ ဘဝမတိုးတက်သူတွေ အနှောင့်အရှက်ခံနေရသူတွေကို ပရိကံ လိုအပ်ချက်ဖြန့်ဝေပေး ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီနေ့ကတော့ ငါးပါးသီလ လုံပါလျက် မပြည့်မစုံဖြစ်နေကြရသော မိတ်တွေအတွက်ပါ။ စာတွေလိုက်ဖတ်တဲ့အခါမှာ ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါရင် အရာရာပြည့်စုံမယ် ကြီးပွားမယ်လို့ ရေးထားတာတွေ ဖတ်ရပါတယ်။ သုတေသနအရ တဝက်မှန်တဝက်မှားပါတယ်လို့ကျွန်တော် အခိုင်အမာပြောပါ မယ်။ ဘာကြောင့်ပြောနိုင်သလဲ ဆိုရင်လက်ခဏာပညာရပ်ကို(၁၃)နှစ်သားကစတင်ရင်းနှီးပြီး ယနေ့အချိန်အထိ အဆက်မပြတ်သုတေ သနလုပ်ခဲ့လို့ပါဘဲ။ … Read more
ပရဟိတ အသင်းအဖွဲ့များ အထူးသတိထားကြရမည့် လိမ်နည်းအသစ်…
ဖုန်းကနေ လိမ်တဲ့ လိမ်နည်းအသစ် တော်တော်များများခံလိုက်ရပါပြီ မနေ့က ၆.၁၀. ၂၀ ဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာပါတယ်….ဒကာကြီး ဦးဇင်းက ဒကာကြီးတို့နယ်ဘက်ကပါ…. ဒကာကြီးတို့မြို့က ( ) ကျောင်းကိုလဲသိပါတယ်…လိုင်းပေါ်မှာ ဒကာကြီးတို့ ကူညီနေတာတွေ့လို့ ဦးဇင်းကျောင်းမှာသုံးနေတဲ့ ကားတစ်စီး လှုချင်လို့ပါ…ဦးဇင်းက ရွှေကုက္ကိုလ် (မြဝတီမြို့နယ်)မှာ ကျောင်းထိုင်ပါတယ်… ဦးဇင်းဘွဲ့အမည်က အရှင်ခေမိန္ဒ ဓမ္မစရိယ အောင်ပီးသားပါ.ဒကာကြီးတို့အသင်းကို ကားလှုချင်လို့… အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ ပို့ခိုင်းလိုက်ပါ့မယ်…ကားပို့ခစရိတ်ကိုလဲ ဝတ္ထုစွန့်လိုက်ပါ့မယ်..အဆင်ပြေလား လို့ ပြောပါတယ်… ကျွန်တော်လဲ အံသြသွားတာပေါ့…ဖုန်းနံပါတ်က တော့ကိုယ်မသိတဲ့ဖုန်းပါ…ရပါတယ် ဦးဇင်း.. အဆင်ပြေသလိုပို့ခိုင်းလိုက်ပါ လက်ခံပေးပါ့မယ်ပေါ့….အဲ့ဒါနဲ့ ဖုန်းနံပတ်တခုပေးပါတယ်…( …..)အဖွဲ့ က အရာရှိ ဆိုပဲ….ကျွန်တော်လဲ ဖုန်းခေါ်ကြည့်တော့… စောအယ်ထူး ဆိုလား မသိပါဘူး…ဦးဇင်း က ပို့ခိုင်းထားတာ မှန်ပါတယ်….ဘယ်အထိပို့ပေးရမလဲ ဆိုတော့ တိုက်ကြီးအထိဆို ရပီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်… ခုန ဆက်တဲ့ … Read more
အိမျထောငျရေး ဖောကျပွနျခွငျး အကွောငျး
အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်ခြင်း (မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ) လောကမှာ အိမ်ထောင်သည် ဘဝရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးသတိထားရမဲ့အရာဟာ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းပါပဲ။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းကို လူမှုအသိုင်းဝန်းနှင့် လူမှုဝန်းကျင်ကလည်း …. လက်မခံသလို ဆွေမျိုးသားချင်း အသိုင်းဝန်းကလည်း လက်မခံပါ။သို့သော်လည်း ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးကြောင့် …. အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်နေသည်ကို တွေ့နေရသည် ၊ ကြားနေရသည်၊ မြင်နေရပါတယ်။ ဒီလိုအိမ်ထောင်ရေးဖတ်ပြန်ဖို့ရာ အဓိကကြတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့…… ၁။သူစိမ်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အနေနီးစပ်ခြင်း။ ၂။ဇနီးသည်နှင့် အနေဝေးခြင်း။ ၃။ မိမိမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ် အကိုင်ရှိခြင်း။ ၄။ ရုပ်ရည် ရူပကာရှိခြင်း။ ၅။ရာထူး ပါဝါ|အာဏာရှိခြင်း။ ၆။စကားပြော လိမ္မာပါးနပ်ခြင်း။ ၇။မိန်းကလေးနဲ့ အားနည်းချက်ကို သိရှိခြင်း။ စသည့်အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်ကြတာများတတ်ပါတယ်။ သင့်မှာ ဘယ်လို့ အရည်ချင်းကောင်းတွေရှိနေပါစေ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်ဖို့ … Read more
ပေါင်ခြံ ညိုမည်းခြင်း ၊ ဟိုကြား ဒီကြား ညိုမည်းခြင်းတို့ကို အထိရောက်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
မိန်းကလေးအချို့က ဘရာဇီယာကို အချိန်တိုင်း၊ အချိန်ပြည့် ဝတ်ထားရတာကိုပဲ သက်တောင့်သက်သာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘရာဇီယာက ရင်သားတွဲကျခြင်းနှင့် ရင်သားပုံ မကျခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ဖို့ အတွက် အမြဲ ဝတ်ထားသင့်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ညအိပ်တဲ့ အခါမှာတော့ မဝတ်သင့်ပါဘူးနော်။ ညအိပ်တဲ့ အခါမှာ ဘရာဇီယာ ဝတ်အိပ်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက် ဘယ်လို ဆိုကျိုးတွေ သက်ရောက်နိုင်လဲ ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့ အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁) ညအိပ်ချိန်မှာ တင်းကြပ်နေတဲ့ ဘရာဇီယာ ဝတ်အိပ်ခြင်းကြောင့် သွေးလည်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပြီး ရင်သား ကြီးထွားမှုကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟော်မုန်းဓာတ် မညီညွတ်ခြင်းကြောင့် စိတ်ခံစားမှု အတက်အကျ မြန်ခြင်း စတဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့် ညဘက်အိပ်တဲ့ … Read more
အရပွေား ဆရာဝနျတှေ အကွံပေးထားတဲ့ အသားအရေ ထိနျးသိမျးနညျး လြှို့ဝှကျခကျြ (၆)ခကျြ
အရေပြား ဆရာဝန်တွေ အကြံပေးထားတဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက် (၆)ချက် အရေပြားအထူးကုတွေနဲ့ တစ်ကြိမ်လောက်တော့ တွေ့ဆုံပြီး အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းကို သေသေချာချာမေးကြည့်ဖူးချင်တယ်ဟုတ်။ ဒါဆိုရင်တော့ဒီဆောင်းပါးလေးဟာ အရေပြားဆရာဝန်တွေ အကြံပေးထားတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေဖြစ်လို့ ကွက်တိပဲနော်။ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်း လိုက်နာပေးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာပြီး လှပတဲ့အသားအရေလေးကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ကောင်းမွန်စွာဆေးကြောပါ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ ပြင်းထန်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းပါတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာတွေကို မသုံးပါနဲ့။ အသားအရေကို အတွင်းပိုင်းအထိ အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးမျိုးကို အသုံးပြုပေးပါ။ (၂) Sunscreen များများလိမ်းပါ Sunscreen လိမ်းတဲ့အခါ နည်းနည်းလေးပဲမလိမ်းပါနဲ့။ ထူထူနဲ့များများလေး လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှအသားအရေရဲ့ အတွင်းပိုင်း ၂လွှာလောက်အထိစိမ့်ဝင်ပြီး နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ပိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၃) ဗူးအသေးရွေးဝယ်ပါ အလှကုန်တွေ၊ Skincare တွေဝယ်တဲ့အခါ ဗူးကြီးထက် … Read more
စကျဆှဲစရာမလိုဘဲ ဆံပငျကို ဖွောငျ့စငျးသှားစမေယျ့ သဘာဝပေါငျးတငျနညျး (၄)ခု…
စက်ဆွဲစရာမလိုဘဲ ဆံပင်ကို ဖြောင့်စင်းသွားစေမယ့် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း (၄)ခု ဓာတုဆေးသုံးပြီး၊ အပူပေးပြီး ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်းက ပျိုမေတို့ဆံကေသာကို ခြောက်သွေ့ပျက်စီးစေတဲ့အပြင် ဆံသားကိုပြောင်းသွားစေတာမျိုး၊ ဆံပင်တွေ အရမ်းကျွတ်ပြီး ပါးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်စေတာကြောင့် ခဏခဏဆံပင်ဖြောင့်လို့မကောင်းဘူးနော်။ ဒီတော့ ဓာတုဆေးမသုံး၊ ဖြောင့်စက်မလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်းဆံပင်လေးတွေဖြောင့်စင်းအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) ကြက်ဥအကာနဲ့ဒိန်ချဉ် ကြက်ဥအကာတစ်လုံး၊ ဒိန်ချဉ်နှစ်ဇွန်းတို့ကိုရောမွှေပြီး ဆံပင်အရင်းကနေအဖျားထိလိမ်းပေးပါ။ နာရီဝက်ကြာရင်ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ပြန်ဆေးချပြီး ခေါင်းပြန်လျှော်ပေးလိုက်ကာ သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံပေးလိုက်ပါ။ ခြောက်သွားတဲ့အခါ ဘီးအစိပ်လေးနဲ့ဖြီးပေးလိုက်ရုံနဲ့ သဘာဝအတိုင်းဖြောင့်စင်းတဲ့ဆံကေသာကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ (၂) ငှက်ပျောသီးနဲ့ပျားရည် ငှက်ပျောသီးမှည့်တစ်လုံး၊ ပျားရည်တစ်ဇွန်းတို့ကို သမအောင်မွှေလိုက်ပြီး ဆံပင်အနှံ့လိမ်းပေးပါ။ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ထားပြီး ရေအေးနဲ့ပဲခေါင်းလျှော်ပေးလိုက်ပါ။ သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံပြီး ဘီးလေးနဲ့ဖြီးပေးလိုက်ရင် ဆံပင်လေးတွေဖြောင့်စင်းသွားပြီး အစိုဓာတ်လည်းပြည့်ဝလာပါလိမ့်မယ်။ (၃) အုန်းဆီနဲ့ပျားရည် အုန်းဆီနှစ်ဇွန်းနဲ့ ပျားရည်နှစ်ဇွန်းဆတူရောပြီး ဆံပင်အရင်းကနေအဖျားထိရွှဲနေအောင်လိမ်းပေးပါ။ နာရီဝက်လောက်ထားပြီး ရေနွေးလေးနဲ့ခေါင်းလျှော်ပေးပြီး …. သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံပေးလိုက်ပါ။ ဆံပင်သားလေးတွေ သိသိသာသာနူးညံ့ပြီးဖြောင့်စင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ … Read more
ဆံပင်အရှည်နှေးလို့ စိတ်မရှည်တဲ့ သူတွေအတွက် တစ်လအတွင်း သိသိသာသာ ဆံပင်ရှည်စေရန်
ဆံပင်က ဒုတိယမျက်နှာဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဆံပင်ပုံစံကကိုယ်နဲ့မလိုက်ရင် လုံးဝမလှတာလည်း အားလုံးအသိပါပဲ။ ဆံပင်အရှည်ထားချင်ပေမယ့် စိတ်မရှည်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ တစ်လအတွင်း ဆံပင်ရှည်လွယ်ပြီးတောက်ပြောင်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) မကြာခဏအဖျားတိပေးပါ ဆံပင်အဖျားလေးတွေကို မကြာခဏတိပေးတာက ဆံပင်ရဲ့မကျန်းမာတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆံပင်ကိုကျန်းမာတောက်ပြောင်တဲ့အသွင်မျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ (၂) ခေါင်းလျှော်တိုင်းပေါင်းဆေးသုံးပေးပါ ခေါင်းလျှော်တိုင်းဆံပင်ပေါင်းဆေးသုံးပေးတာက ဆံသားခြောက်သွေ့တာ၊ ဆံပင်တွေညှိပြီး ပြတ်တာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံပင်ပိုရှည်အောင် အားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းလျှော်တိုင်းဆံပင်ပေါင်းဆေးကိုမဖြစ်မနေသုံးပေးပါ။ (၃) သဘာဝအသီးအနှံတွေနဲ့ပေါင်းတင်ပါ ဆံပင်ရှည်လွယ်ချင်သူတွေအနေနဲ့ သဘာဝအသီးအနှံတွေနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီတစ်လုံးကို အတုံးလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိတ်ပြီးအရည်ညှစ်ပါ။ ရလာတဲ့အရည်ကို သံလွင်ဆီအနည်းငယ်နဲ့ရောပြီး ဦးရေပြားနဲ့ဆံပင်အနှံ့ရွှဲနေအောင်လိမ်းပေးကာ နာရီဝက်လောက်ကြာရင် ခေါင်းလျှော်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီနည်းကို တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်လုပ်ပေးရင် တစ်လကြာတဲ့အခါ ဆံပင်သိသိသာသာရှည်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ (၄) သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံတဲ့နည်းကိုသုံးပါ ဆံပင်ရှည်လွယ်ချင်သူတွေက ဆံပင်နဲ့ဦးရေပြားကို တတ်နိုင်သလောက်အပူမထိအောင် ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ တဘက်နဲ့ရေစင်အောင်သုတ်ပြီး သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံတာက အကောင်းဆုံးပါ။အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေကို … Read more
ချွေးပေါက်ကျယ်နေလို့ အလှပျက်နေတယ်ဆိုတဲ့ နတ်သမီးလေးများ အတွက် ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်း
ချွေးပေါက်ကျယ်နေလို့ အလှပျက်နေတယ်ဆိုတဲ့ နတ်သမီးလေးများအတွက် ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်း ချွေးပေါက်ကျယ်လို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား။ လုံးဝမညစ်ပါနဲ့။ အခုပြောမယ့်နည်းက ချွေးပေါက်ကျယ်သူတွေကို အကောင်းဆုံး ပြုပြင်ပေးမယ့်နည်းတခု ဖြစ်လို့ပါ။ ကြက်ဥအကာကို သုံးရုံပါပဲ။ ပြောစရာတခုရှိတာက နည်းနည်းလက်ဝင်တာပါ။ ကြက်ဥအကာကို ခရင်မ်ပုံစံဖြစ်တဲ့အထိ အဆက်မပြတ်တော့ ခေါက်ပေးရပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေက ကြက်ဥအကာ – (၁) လုံး သကြား – ထမင်းစားဇွန်း (၁) ဇွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကြက်ဥတလုံးကို ဖောက်ပြီး အကာကို ပန်းကန်လုံးတခုထဲထည့်ပါ။ အဝါနှစ် လုံးဝမပါစေရ။(အဝါနှစ်ပါရင် ဆက် လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး) ၂။ ပန်းကန်ထဲကို သကြား ထမင်းစားဇွန်း (၁)ဇွန်း ထပ်ထည့်ပါ။ ကြက်ဥအကာနဲ့ သကြားကို ရောမွှေပြီး ခလောက်ပါ။ ၃။ မွှေတဲ့အခါ ခလောက်တံတခုခုသုံးရပါမယ်။ … Read more
အတော မသတျနိုငျတဲ့ လောဘသားတှေ…(သတိထားကွပါဗြာ)
ပုစွန်တုပ်ထဲက သံခဲ ၂ ခဲနဲ့ ယခုထက်ထိ အတောမသတ်နိုင်သေးတဲ့ လောဘသား ဈေးသည်များ ယနေ့ ဈေးက ဝယ်လာတဲ့ ပုစွန်တုပ်ကို ချက်မလို့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ပုစွန်တုပ် အသားထဲမှာ မြှုပ်ထားတဲ့ သံခဲ ၂ ခဲကို ထူးဆန်းစွာ တွေ့ရပါတယ်။ သံခဲ ၂ ခဲက တော်တော် လေးပြီး အနည်းဆုံး ၁၀ သားလောက် ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ အလေးခိုးတဲ့ နည်းလိုပါပဲ၊ ဈေးဆိုင်ထဲက ချိန်ခွင်တွေ၊ ကတ္တားတွေမှာ အလေးခိုး မထားဘဲ ဝယ်မယ့် ပစ္စည်းထဲမှာ အလေးချိန် များ‌အောင် ထည့်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။ ကြက်ဆိုလည်း ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ရေထိုး၊ ဝက်သားဆိုလည်း လတ်တယ်ထင်ရအောင် သွေးတွေကို အသားတွေ ပေါ် သုတ်ပေး၊ … Read more